Wasiirka Ganacsiga XFS oo kulan la qaatay Guddiga Ganacsiga, Warshadaha iyo Dhaqaalaha ee Golaha Shacabka “Sawirro” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka Ganacsiga XFS oo kulan la qaatay Guddiga Ganacsiga, Warshadaha iyo Dhaqaalaha ee Golaha Shacabka “Sawirro”
Muqdisho (SONNA)- Guddiga ganacsiga, warshadaha iyo dhaqaalaha ee Golaha Shacabka ayaa maanta la kulmay xubno uu hogaaminayay Wasiirka wasaarada ganacsiga ee Xukuumadda Soomaaliya mudane C/llaahi Cali Xasan.
Kulanka oo ka dhacay xafiiska guddiga oo ku yaalla xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxaa shir guddoominaayay guddoomiyaha guddiga Xildhibaan Maxamuud C/raxmaan Beene Beene.
Kulanka ayaa ahaa mid isbarasho guddiga iyo wasiirka, xog wareysi ku saabsanaa shaqada iyo su’aalo weydiin.
Guddiga ayaa wasiirka weydiiyay su’aalo ku saabsanaa shaqada wasaarada, sharciyada ay isla diyaarinayaan labada dhinac, culeysyada jira, howlaha u qabsoomay wasaarada iyo kuwa ay hadda ku howlan tahay.
Guddiga iyo wasaaradda ayaa ku balamay in la dardar geliyo sharciga jaan goynta tayo dhowrka iyo xoojinta wada shaqeynta labada dhinac.
Wasiirka wasaarada ganacsiga ee Xukuumadda Soomaaliya mudane C/llaahi Cali Xasan ayaa u mahad celiyay guddiga oo uu ku amaanay sida ay diyaarka ugu yihiin wada shaqeynta wasaarada iyo dardar gelinta shaqooyinka ka dhaxeeya.
Guddoomiyaha guddiga ganacsiga, warshadaha iyo dhaqaalaha ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamuud C/raxmaan Beene Beene ayaa sheegay in guddigooda iyo wasaarada sharciyo muhiim ah ay isla diyaarinayaan, laguna balamay in la dardar geliyo shaqada.